Aiza marina no PatagoniaAll Here - Travel, Weather, Desert - Arzantina
ny fomba fitsitsiana ny fiainana bateria amin'ny ipad
manaova bibikely fandriana toy ny lavender
tsipika fotsy manerana ny efijery iphone
olana amin'ny fiainana bateria paoma
Aiza marina no Patagonia?
Aiza i Patagonia?
Eny raha manontany ny olona ao an-toerana ianao sakay hoy izy ireo dia manomboka any Puerto Montt izany ary mianatsimo. Raha manontany ny olona ao an-toerana ianao Arzantina hoy izy ireo avy any San Carlos de Bariloche mianatsimo. Ka iza no marina? Eny, izy roa ireo. I Patagonia dia misy an'i Chile sy Arzantina, manomboka amin'ireo teboka fanombohana ireo hatrany amin'ny tendrony kaontinanta, sahabo ho 3000km atsimo.
Ny teny tokana ifanarahan'ny Shiliana sy Arzantina mikasika an'i Patagonia dia ny SOUTH. Rehefa mijery sarintany ianao dia toa tsy dia lavitra loatra izany fa aleo apetraka amin'ny sehatra manerantany; raha mijery ny sarintanin'izao tontolo izao ianao ary manomboka mitondra fiara avy eo amin'ny tendrony Afrika dia mamily mianatsimo ho an'ny halavan'ny Cairns mankany Melbourne, na Paris mankany afovoan'i Russia, na New York mankany Las Vegas, dia mbola tsy hitovy amin'ny sarintany ihany ianao ny faran'ny Amerikanina atsimo kaontinanta. Raha ny marina dia ny hany any atsimo ihany Antarctica ary izany dia 1000kms fotsiny avy amin'ny tendron'i Amerika atsimo !!
Viva malaza indrindra Fitsidihana Patagonia :
Patagonia dia : Dia diabe maharitra 27 andro izay hitety ny tsara indrindra any atsimon'i Arzantina sy Silia. Araho ny Andes rehefa mizaha ny hatsaran-tarehin'i Patagonia kanto amin'ity fitsangatsanganana mahatalanjona ity!
Patagonia atsimo : Fitsangatsanganana 13 andro hitety an'i Patagonia atsimo lavitra, hahita ny valan-javaboary faran'izay tsara any Amerika Atsimo
Patagonia tena ilaina : 6 andro hijerena ny Perito Moreno Glacier sy ny valan-javaboary lehibe Torres Del Paine
Ahoana no nahazoan'ny Patagonia ny anarany?
Ny fanazavana marina momba ny toerana niavian'ilay anarana Patagonia dia tsy mazava. Manaiky ny ankamaroany fa misy ifandraisany amin'ny fahatongavan'ilay mpikaroka portogey Ferdinand Magellan tamin'ny 1520.
Rehefa tonga tany amin'ny faritra atsimon'ny kaontinanta i Magellan sy ny ekipany dia nahita dian-tongotra lehibe teo amoron-tsiraka sy ny manodidina izy ireo.
Bigfoot dia fantatra amin'ny anarana hoe Patagones amin'ny teny Portiogey ary Patagonia no ho tanin'ny tongotra lehibe. Niely vetivety ny tsaho momba ny olona goavambe mitety ny tany. Ankehitriny, toa sahala amin'ny angano vady taloha izany; goavambe mandehandeha eny an-tany - hadalana ahoana izany. Saingy, amin'izao fotoana izao eo amin'ny tantara, indizeny an'arivony no nanao, raha ny marina, nitety ny tany. Ny vondrona sasany, izany hoe ny Selknam / Onas dia lava lava (1.8m-1.9m) mifandraika amin'ny Portiogey na Espaniola (1.5m-1.6m). Mpihaza / mpanangona mpifindrafindra monina izy ireo ary matetika no nanao baoty avy amin'ny haton'ny guanacos. Ireo baoty ireo dia hiteraka dian-tongotra lehibe kokoa amin'ny fasika…. angamba diso hevitra ho goavambe ??
Maka ny antsasaky ny sakay ary ny ampahatelon'ny Arzantina teny iray hafa izay ho renao ny mponina marobe milaza momba an'i Patagonia hoe GRANDE na lehibe. Tsy manao na inona na inona amin'ny ambaratonga kely any izy ireo. Manana volkano lehibe, farihy lehibe, glaciers / icefield lehibe ary valan-javaboary lehibe feno tandavan-tendrombohitra lehibe. Izy io dia kianja filalaovana traikefa nahafinaritra.
Inona no ao Patagonia?
Ahoana ny fitsangatsanganana any Patagonia
Misy lisitry ny siny vitsivitsy izay tsy misy dia manova fiainana manerana an'i Patagonia. Ao amin'ny torolàlana feno an'ny T + L, hasehonay anao ny fomba hahitana ireo ala, fjords, ary glaciers angano.
Ny Patagonia atsimo, izay mamaky an'i Chili sy Arzantina, dia efa ela no nisarika ny mpandeha ho any amin'ny faran'ny izao tontolo izao miaraka amin'ireo tampon-kavoany voasokitra tamin'ny glaciers taloha sy ny tontolon'ny tsipelina. Eto, amin'ny valan-javaboary any amin'ireo firenena, dia misy tendrombohitra feno rakotra lanezy, fjords cobalt, ary ala maniry taloha. Any amin'ny tendrony atsimo atsinanan'i Amerika, dia vaky ny vongan-dranomandry amin'ny alalàn'ny fikotrokotroka avy amin'ny vongan-dranomandry tranainy.
Ny valan-javaboary Torres del Paine any Chile ary ny Valan-javaboary Los Glaciares any Arzantina no zava-dehibe indrindra amin'ny faritra, manintona mpitsidika an'hetsiny isan-taona. Ho an'ny dia Patagonian feno, atambaro ny fitsidihana ireo faritra roa amin'ny faritra. Mazava ho azy, ny fanaovana izany dia mitaky fandaminana lojika be dia be - indrindra mandritra ny vanim-potoana avo. Ity misy ravin-tendrony feno mba hanampy anao hampitombo ny dianao amin'ity faritra lavitra eto an-tany ity.
Rahoviana no handeha
Any El Calafate sy Torres del Paine, matetika ny hotely dia manomboka amin'ny lohataona atsimo ka hatramin'ny fararano (tapaky ny volana septambra ka hatramin'ny voalohan'ny volana Mey). Trano vitsivitsy monja sisa tavela mandritra ny taona, toy ny hotely Explora.
Mba hisorohana ny valalabemandry ary mbola mahatsapa toetr'andro tsara ianao dia tsidiho mandritra ny lohataona rehefa mamony ny voninkazo, na mianjera rehefa mozika mena sy mavo ary mavo ny ravina. Ny volana fahavaratra (Desambra - Febroary) dia manana ny toetrandro malefaka indrindra, nefa tadidio fa ny mari-pana dia mahalana mihoatra ny 70 degre ary mahery ny rivotra.
Tokony ho fantatry ny mpandeha fa ny toetr'andro ao Patagonia dia tsy azo vinavinaina indrindra, indrindra amin'ny lohataona sy amin'ny fiandohan'ny fahavaratra. Mety hiovaova ny toetrandro sy ny mari-pana raha tsy misy fampitandremana ary tafio-drivotra mahery avy any Pasifika. Manampy ny fametahana ny fandaharam-potoananao amin'ny andro fanampiny raha sendra tojo toetr'andro ratsy ianao.
Koa satria lehibe dia lavitra ny toerana any Shily sy Arzantina, mila manidina any Patagonia ianao (raha tsy efa herinandro maromaro ianao no hamakivakiana lalana). Feno seza fiaramanidina vetivety mandritra ny vanim-potoana faratampony (Desambra-Febroary), noho izany dia tokony hividy tapakila alavitra araka izay tratra ianao: Mety tsara ny enim-bolana. Mandritra ny volana hafa amin'ny vanim-potoana avo (Oktobra hatramin'ny fiandohan'ny volana Mey) dia manafatra telo volana mialoha mba hisorohana ny saran-dalamby sy ny safidy voafetra.
Any Silia, ny LATAM Airlines dia manompo ny atsimon'i Patagonia Shiliana mandavantaona misy sidina isan'andro eo anelanelan'i Santiago sy Punta Arenas miaraka amina sidina mihoatra ny adiny telo. Ny saran-dàlana manodidina dia manomboka amin'ny $ 130 rehefa vidiana mialoha.
Amin'ity volana desambra ity, hanolotra sidina roa isan-kerinandro (3 ora 10 minitra) eo anelanelan'i Santiago sy Puerto Natales ny sidina. Mijanona ny sidina miverina any Punta Arenas. Hiakatra hatrany ny sidina efatra ho sidina efatra isan-kerinandro amin'ny volana Janoary sy Febroary, manomboka amin'ny 130 $.
Ny toetr'andro ao Patagonia dia tena tsy azo vinavinaina miaraka amin'ny faritra maro miavaka amin'ny toetr'andro miaraka amin'ny maripana, tara-masoandro ary rotsakorana. Ireo mpitsangatsangana dia tokony ho vonona tsara amin'ny toetrandro rehetra na oviana na oviana ianao misafidy ny handeha.
Ny fampahalalana eto ambany dia famaritana ankapobeny momba ny toetrandro miankina amin'ny faritra tsirairay.
Amin'ity faritra ity dia manjaka ny rivotra andrefana ary, any amoron-tsiraka dia misy tafiotra mahery. Maina be ny rivotra, mahatratra hatrany amin'ny 10 santimetatra (250 milimetatra isan-taona) ny orana ary tsy misy lanezy. Ny hafanan'ny rano an-dranomasina dia mahafinaritra, satria mahafinaritra ny mari-pana amin'ny rano an-dranomasina, satria ny faran'ny ranomasina dia fandroana amin'ny faran'ny atsimo amin'ny rano mafana any Brezila.
Ny toetrandro dia azo faritana toy ny an'ny lembalemba maina. Ny orana dia eo anelanelan'ny 8 ka hatramin'ny 12 santimetatra (200 ka hatramin'ny 300 milimetatra isan-taona), tsy misy oram-panala. Ny rivotra avy any andrefana sy atsimo dia saika tsy miova. Mangatsiaka be ny maripanan'ny rano an-dranomasina.
Eto ny ranomasina sy ny tendrombohitra dia manampy amin'ny fampandeferana ny toetrandro. Ao amin'ny faritry ny renirano Grande ny rivotra avy any andrefana dia mitsoka amin'ny hafainganam-pandeha 15,5 mph (25 km / h) miaraka amin'ny fipoahana hatramin'ny 124 mph (200 km / h), miaraka amina fe-potoana milamina vitsivitsy. Ao Ushuaia. ny rivotra atsimo andrefana no manjaka, amin'ny 37 mph (59 km / h) ny hafainganam-pandehany miaraka amin'ny fipoahana hatramin'ny 62 mph (100 km / h), fa amin'ny fotoana milamina kokoa. Fahita rahona ny rahona eo akaikin'ny Beagle Channel.
Ny toetrandro dia avy amin'ny mando be eo amin'ny tandavan-tendrombohitra ka hatramin'ny mando amin'ny fiandohan'ny lemaka. Mihamafy ny orana mankany andrefana, ary miaraka amin'ny oram-panala amin'ny ririnina.
Izy io dia faritry ny tandavan-tendrombohitra sy tandavan-tendrombohitra miaraka amin'ny fisian'ny orana miha-betsaka hatrany. Amin'ny ririnina, be dia be ny lanezy ary ny tandavan-tendrombohitra dia manampy amin'ny fampandehanana ny rivotra.
Ny fotoana tsara indrindra handehanana mankany Patagonia?
Voalaza fa ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Patagonia dia mandritra ny volana fahavaratra amin'ny volana desambra hatramin'ny febroary fa afaka mandeha amin'ny faritra maro any avaratr'i Chile sy Arzantina ianao mandritra ny taona. Ny vanim-potoana lehibe dia amin'ny volana oktobra-martsa raha eo anelanelan'ny 65 ° F amin'ny masoandro ka hatramin'ny 40 ° s ambany ny antoandro.
Fahavaratra (Desambra, Janoary & Febroary):
Manoro hevitra anao izahay hitsidika an'i Patagonia mandritra ny fahavaratra (Desambra ka hatramin'ny martsa), satria fotoana mafana indrindra amin'ny taona, mazava ho azy, miaraka amin'ny mari-pana avo lenta eo amin'ny 15 ° C nefa amin'izao fotoana izao ny rivotra mahery dia mahery indrindra ary mety hahatratra 120 mahery kilometatra isan'ora. Ny fitsidihana an'i Patagonia mandritra ireo volana ireo dia hanome valisoa anao amin'ny toetrandro tsara indrindra. Na dia amin'ny fahavaratra aza dia hifaninana amin'ny vahoaka marobe ianao mandritra io vanim-potoana tampon'ny io. Ny volana mialoha sy manaraka ny vanin-taona mafana dia manana ny manintona azy manokana.
Fahalavoana (Martsa, Aprily & Mey):
Ny fahalavoana dia manome valisoa amin'ireo mpandeha amin'ny loko tsara tarehy indrindra HAZO manomboka mandatsaka ny ravin'izy ireo mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina, fa ny rivotra na dia mety mbola ho avy aza - dia somary ambany kokoa.
Fotoana mahafinaritra handehanana fakàna sary ny fiainana dia sy zava-boahary ary gaga amin'ny fiainana zavamaniry miovaova Patagonia. Tsy dia matanjaka be ny rivotra toy ny amin'ny lohataona, ary samy manomboka mihena ny tahan'ny hotely sy ny vahoaka marobe. Ny haavo isan'andro dia tafiditra amin'ny taona 40 sy 50, ka mahatonga ny toe-piainana mahazo aina amin'ny fikarohana.
Tany Efitra Patagonian
Ny Desert Patagonian dia mamaky ny velaran-tany 673.000 kilometatra toradroa any amin'ny faritra atsimon'ny tanibe Arzantina sy ny ampahany amin'i Silia. Ilay efitra, fantatra ihany koa amin'ny hoe Patagonia Steppe na Magellanic Steppe, dia fehezin'ny Patagonian Andes any andrefana, ny Atlantika Atlantika atsinanana ary ny reniranon'i Colorado any avaratra. Na dia ny Selat'i Magellan aza dia azo raisina ho ny faran'ny atsimo amin'ity efitra ity, ireo tandavan-tany efitra koa dia mipaka hatrany amin'ny faritry Tierra del Fuego. Ny topografian'ny Desert Patagonian dia malalaka sy miovaova, rakotry ny tablelands, massifs, lohasaha, lohasaha, ary farihy fiaviany glacial.
Ny Desert Patagonian dia nonenan'ireo mpihaza mpihaza hatramin'ny ela. Ny karana Tehuelche no tompon-tany nonina teto amin'ity tany ity, ary mety nisy efa nisy hatramin'ny 5,100 taona lasa izay. Guanaco sy rhea no biby manan-danja indrindra nihaza tamin'ireny foko teratany taloha ireny. Taty aoriana, ny Espaniola voalohany, ary avy eo ny Anglisy, dia nanandrana nanorina toeram-ponenana mpanjanaka manamorona ny morontsiraka Patagonian tamin'ny faran'ny taonjato faha-18 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-19, saingy tsy nisy ny faharetan'ny toeram-ponenana ireo.
Taona maro taorian'ny fahaleovan-tenan'i Arzantina, ny indianina teratany dia noroahina avy tany amin'ny faritr'i Patagonia nandritra ny fampielezan-kevitry ny Desert Campert tamin'ny 1870 izay nataon'ny Eoropeanina. Ireo mpifindra monina vaovao dia nibodo ny faritra tamin'ny fitrandrahana harena lehibe voajanahary, anisan'izany ny fametrahana mineraly midadasika ao amin'ny faritra. Ny fambolena biby koa dia nanjary loharanom-piveloman'ireto mponina any an'efitra vaovao ireto.
Ny Desert Patagonian dia mahasarika mpizahatany maro isan-taona any Arzantina. Ny fisian'ny zavamaniry sy karazam-biby tsy fahita firy, tsy manam-paharoa ary matetika, miaraka amin'ny hatsaran-tarehy masiaka sy masiaka amin'ny ala Patagonia, dia niteraka ny famoronana valan-javaboary marobe ao amin'io faritra io, ary izy ireo dia manintona mpizahatany lehibe. Ireo mpikaroka sy geolojika siantifika dia mitsidika ny faritra ihany koa handalina ny ekolojia, glaciolojia ary harena mineraly any amin'ny fonenan'ity efitra ity.
Ny zava-maniry any an'efitra dia manohana vondron'omby maro be, indrindra fa ny ondry, izay notezain'ny mpiompy monina sy miasa ao amin'ny faritry ny Desert Patagonian. Ny paiso, amandy, alfalfa, daty, oliva ary voaloboka dia vokatra sasany manan-danja ara-barotra ambolena eto. Ny Desert Patagonian koa dia manana tahiry mineraly goavambe vy, manganese, uranium, zinc, varahina ary volamena.
- I Bariloche dia mipetraka eo amoron'ny farihin'i Nahuel Huapi 65000 hektara. Mahagaga fa ity farihy ity dia misy ny gull kelp sy ny cormorant manana maso manga izay vorona an-dranomasina tanteraka
- Farihin'i Nahuel Huap tranon'ny Nosy Huemul aho. Tamin'ny taona 50 tany ho any dia nanandrana mangingina i Arg hanangana ny reacteur fusion nokleary voalohany eran'izao tontolo izao.
Fanambarana diso momba ny fahombiazana no niteraka ny iraisampirenena ???? noho ny fikarohana fusion.
- Vondrom-piarahamonina Mapuche kely teratany akaikin'i Leleque, Arzantina dia ady an-trano maharitra miaraka amin'ny orinasa iraisam-pirenena momba ny akanjo Bennetton momba ny zon'ny fananantany.
- Tamin'ny 1895 dia hita tao anaty lava-bato akaiky ny sisa tavela amin'ny Milodon Puerto Natales any Silia. Io biby io dia avo roa heny noho ny fatin'ny bera mirehitra, ny rambon'ny kangoroa ary ny tanana sy ny tarehy kamo.
- Ny Hanging Glacier an'ny Queulat National Park any Silia dia misy toad.melin efatra ihany koa